Hadalka ka soo yeedhay M/weyne Erdogan oo sababay xasarad lacageed | Qaran News
Hadalka ka soo yeedhay M/weyne Erdogan oo sababay xasarad lacageed
Writen by Qaran News | 1:04 pm 24th Nov, 2021
Qiimaha lacagta Turkey ee Lira ayaa Talaadadii gaartay heerkii ugu hooseeyey kadib markii madaxweyne Erdogan uu ku adkeystay rabitaankiisa ah in la dhimo dul-saarka, kana digay in dalkiisa “uu ku jiro dagaal madax-banaani dhaqaale ah.”
Sarifka lacagta Lira ayaa gaartay 13 halkii dollar-ba, taasi oo ah qiimo dhac 15% ah maalin gudaheed ah, kahor inta aanay xoogaa yar dib usoo kaban.
Turkey ayaa wajaheysa xasaraddii lacageed ee ugu xumeyd tan iyo 2018 markii qiimaha Lira uu gaaray heerkii ugu hooseeyey xilligaas oo uu muran kala dhaxeeyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump.
Bankiga Dhexe ee Turkey ayaa Khamiistii tegtay u hoggaansamay cadaadiska Erdogan, wuxuuna siyaasaddiisa heerka dul-saar dhimista ka dhigay 15 boqolkiiba, halka markii hore ay ka aheyd 16, inkasta oo dalka uu wajahayo sicir-bar iyo qiimo dhac lacageed.
Erdogan oo aad uga soo horjeeda dul-saarka, isaga oo rumeysan in dul-saarka uu mas’uul ka yahay sicir-bararka ee aanu hoos u dhigeyn, wuxuuna mar kale Isniintii difaacay aragtidiisa.
“Waxaan aragnaa cayaarta ay kuwaas wadaan ee ku aadan lacagta, dul-saarka iyo sare u kaca qiimaha badeecadda, waxaana tusi doonnaa qorshaha cayaarteena,” ayuu yiri.
“Waan ku guuleysan doonnaa dagaalkan madax-banaanida dhaqaale ah, anaga oo kaashaneyna caawimaadda Allah iyo shacabkeena.”
Lacagta Lira ayaa lumisay 40 qiimaheeda marka loo eego dollar-ka, tan iyo billowgii sanadkan, waxaana sicir-bararka uu gaaray 20 boqolkiiba, taasi oo afar jeer ka badan bartilmaameedka dowladda.
Kadib hoos u dhacii Lira ku yimid Talaadadii, Erdogan ayaa la kulmay guddoomiyaha Bankiga Dhexe Sahap Kavcioglu, hase yeeshee wax faah-faahin ah lagama bixin kulanka
Taxliiliyayaasha siyaasadeed ayaa rumeysan in dhibaatooyinka dhaqaale ee Turkey ay cadaadis xooggan saari doonaan Erdogan oo isku diyaarinaya doorashooyinka madaxweyne ee 2023, xilli ay mucaaradka dalkaas dhisayaan isbaheysi.